Kulo nyaka, omunye nje kumele ibe okungenani umfanekiso kadrako. Liluphawu konyaka, ezingase zilethe impumelelo, ukuchuma nenhlalakahle yabo bonke abakhileyo yokuhlala. Dragon - isilwane ezithakazelisayo kakhulu osimo kuncike kanjani kuchazwa Kwezinye izingxenye zomhlaba. Siyazi ezesabekayo enhle esinezimpondo futhi ezinamaphiko, abanquma ziveza ngesikhathi New Year eMpumalanga emgwaqweni lokwentiwako, futhi kabani izibalo abeke etafuleni iholide. Ziyakwazi onomzali oluyingungu, has umbala, ngokuvamile obomvu noma ophuzi. Lesi silwane wasenganekwaneni, kodwa akuyona esabekayo. Kunokunye ongakwenza Snake Gorynycha emakhanda amathathu - futhi udrako, kodwa Western. Yena uphefumula umlilo, kodwa kungase futhi likhanga kakhulu futhi ayinangozi.
Ubani ubungakhetha njengoba iwuphawu ngonyaka, kungenzeka ukuveza usebenzisa origami Modular. Dragon etholwe voluminous, ekhangayo futhi cute. Kuyinto ngisho ingane nokwenzeka - ukudala sibalo origami isitayela. Dragon we amamojuli kungaba njengenhlangano yezandla azimele kanye nezipho kumnandi ngesikhathi iholidi umndeni wakhe. Ngaphezu kwalokho, isimo esingokoqobo ukuhlela ezokungcebeleka wonke umndeni - yingakho-ke ubuciko plus origami. Dragon Wabasaqalayo ka wonke amamojuli zidinga amakhulu amapheshana eligoqiwe, kodwa injabulo kuzoletha ngempela. Imishini yokukhiqiza amamojuli waziwa futhi kuchazwa kuwebhusayithi onguchwepheshe master emakilasini. Lapha into esemqoka - ukuhlonipha olinganise, usayizi Ungakhetha ngokwabo. Izingqikithi bese origami ezinhle Modular - udrako ungathola ubukhulu futhi kufika imitha, zonke ngesicelo abadali! Ingane kuba lula ukuvula onxantathu ezinkulu.
Ngakho, into ebaluleke kakhulu ukuqala - ukufunda lokho origami Modular. Dragon yiluphi uhlobo siqukethe onxantathu encane usayizi ofanayo, nasezinsikeni nomunye ngaphandle glue. I module ikuvumela ukuxhuma nabanye efanayo. Ngokwengxenye enkulu, akunzima ukufunda amasu, esetshenziswa origami Modular. Nokho, udrako, njengoba kukhona isakhiwo eziyinkimbinkimbi, ifuna imali ethé xaxa sasivumela ehloniphekile yalezi amamojuli efanayo - mayelana 1000 esinye salezi zilwane. Chain modules ngenxa amabutho ngomshikisho kusekeliwe wawuqinisa - bangathumela zintengezele, okufutshane futhi ube isisekelo yanoma iluphi - umbuthano amamojuli. Okulandelayo, amamojuli workpiece ahlukaniswe umbuthano yesibili nokunye. Ukuthola atholwe ukuma ofiselekayo, kungenzeka ukwandisa noma ukunciphisa inani amamojuli endilingeni ngayinye. Ngenxa yalesi module olandelayo, noma ukubeka amabili okuqondene round langaphambilini, noma, Ngakolunye uhlangothi, abeke ezimbili ezintsha module ngamunye. Konke ilula, kodwa kumele kube ngokunembile ukubala inani izakhi uchungechunge ngamunye, izihitshela lapho ijezi. kudingeka ngokukhethekile sina ukuba ubheke amamojuli uxhumano anemibala ehlukene - e kokuqendwa sibalo amaphutha ukuhluleka ukulandela Isikimi ikakhulukazi kuyabonakala.
Ngokwengxenye enkulu, amamojula ngokwabo balandele ukuma futhi ningathuli ke ukuwa. Nokho, imininingwane efana amaphiko, imilenze ikhanda uzodinga unamathele umzimba. Kunenye imfihlo: kubalulekile ukukhetha endaweni efanele ukuze unamathisele nasemilenzeni ukulinganisela maphakathi gravity of izingcezu esiphelele. Uma konke ukhethwa ngendlela efanele, origami dragon kuyoba ukuma sasivumela esitebeleni kwayona. Yiqiniso, kungcono kakhulu ukusebenzisa i-glue PVA - futhi enokwethenjelwa, futhi abukho ubufakazi.
Lapha, empeleni, futhi zonke art ngobuqili origami. Ungesabi ukuthatha ukuqaliswa ngisho sobala at efika kuqala izibalo eziyinkimbinkimbi - eqinisweni, ngoba isabelo fair ukunakwa ukubekezela, konke kungenzeka ukuze lelisu ngisho lutho. Origami lifana iyiphi ezifekethisiweyo; kanzima string ubuhlalu okokuqala, kunzima ukwakha ngowokuqala cross-Stitch, futhi kunzima ukuluka ngensonto ngaphandle kokuqina noma ziba ngcono umkhiqizo lapho izinaliti kuphela ezandleni! Kodwa izobanjelwa nje izinsukwana - nangekhono kwakhiwa emangalisayo. Futhi origami ins - kungcono lula kunalokho ukunitha ku-loop!
Indlela obumbene Bolero ukukhilosha: isikimu